NamasteNEPALI.com: एसएसपी रमेश खरेलले फेसबुकमार्फत सेना गुहारेपछि विवादमा
एसएसपी रमेश खरेलले फेसबुकमार्फत सेना गुहारेपछि विवादमा
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका चर्चित एसएसपी रमेश खरेलकाे नाममा कैलालीको टीकापुर घटनापछि नेपाली सेना गुहार्दै ‘नेपाली हुँ’ भन्ने बाहेक सबैलाई ‘त्यहीँ गोली ठोक’ भन्दै नेपाली सेनालाई गुहारेको आफ्नो स्टाटस सार्वजनिक गरेपछि खैलाबैला मच्चिएको छ ।
५० हजार ४ सय ३९ जनाले लाइक गरेको नेपाली नाम ‘रमेश खरेल’कै पेजमार्फत टीकापुर घटनापछि बरिष्ठ प्रहरी अधिकारीकै यस्तो स्टाटस सार्वजनिक भएपछि खैलाबैला भएको हो । उनको स्टाटसमा लेखिएको छ– ‘तँ को होस् ? भनेर सोध्दै हिँड सेना ! ‘दलित हुँ, आदिवासी हुँ, बाहुन हुँ, मधेसी हुँ’ भन्नेलाई त्यहीँ ठोक’ ‘नेपाली हुँ’ भन्नेलाई छोडिदिए हुन्छ !’
१२ घण्टा अघि एसएसपी रमेश खरेलले यो स्टाटस फेसबुकमा राखेका थिए । तर, त्यो भन्दा अघि नै फेसबुकमा यो स्टाटस सार्वजनिक भएको थियो ।
खरेलले पनि फेसबुकमा भाइरल बनेको यो स्टाटस कपी गरेर राखेको देखिन्छ । खरेलले भन्दा अगाडि पोखराकी अस्मिता रिजालले यही ब्यहोराको स्टाटस पोस्ट गरेकी थिइन् । यस्तै अरुले पनि यही स्टाटस कपी गर्दै फेसबुकमा पोस्ट गरेका छन् ।
मेरो नाममा खोलिएका विभिन्न नक्कली फेसबुक आईडीहरुबाट त्यस्तो लेखिएको हाे । मैले यसलाई गम्भीर रुपमा लिएको छु तर, त्यो स्टाटस तपाईले नै लेखेको हो ? भन्ने प्रश्नमा उनले आफ्नो नामबाट विभिन्न नक्कली फेसबुक आइडीहरुमार्फत गलत तथ्य र टिप्पणी सार्वजनिक भएकोे बताए ।
आफ्नो नाममा खोलिएका ती सबै फेसबुक आईडीहरु नक्कली भएको उनको भनाई छ । ‘मलाई यो बीचमा तपाईले के लेखेको हो भनेर धेरै फोनहरु आई रहेका छन् तर मैले त्यस्तो केही पनि लेखेको छैन । मेरो नाममा खोलिएका विभिन्न नक्कली फेसबुक आईडीहरुबाट त्यस्तो लेखिएको हाे । मैले यसलाई गम्भीर रुपमा लिएको छु ।’– खरेलले भने ।
चितवनको भरतपुरस्थित नेपाल प्रहरीको तालिम केन्द्रमा रहेका उनले भरतपुरमा इन्टरनेट कमजोर भएका कारण आफूले सबै कुरा हेर्न नपाएकाले त्यसलाई डिएक्टिभेट गर्न नसकिएको बताए । ‘हामीले यहाँ प्रयोग गर्ने इन्टरनेट हेडक्वाटरको नै हो तर अहिले कमजोर इन्टरनेट सुस्त भएका कारण मैले यसमाथि ध्यान दिएर कारवाही अगाडि बढाउन सकेको छैन । तर अब विज्ञहरु झिकाएर ती सबै आईडीहरु बन्द गर्ने तयारीमा छु ।’ उनले भने ।
खरेलले आफ्नो अफिसियल फेसबुक आईडीमा पनि विभिन्न मानिसहरुले विभिन्न प्रकारका ट्यागहरु गरेर अप्ठेरो परेकोसमेत बताए । ‘मेरो नाममा खोलेका फेक आईडीहरु र मेरो आफ्नै फेसबुक पेजमा पनि अनेकौं प्रकारका कुरा ट्याग गरी दिएका कारण अब म आफ्नो आईडीसमेत बन्द गर्ने सोचमा पुगेको छु ।’– खरेलले भने ।
कैलालीमा एसएसपीसहित ८ जनाले ज्यान गुमाएपछि आक्रोशित हुँदै केही फेसबुक प्रयोगकर्ताले यही स्टाटस कपी गर्दै आफ्नो फेसबुकमा पोस्ट गरेका थिए । खरेलको नाममा यो स्टाटस आएपछि कपी गरी पोस्ट गर्नेको संख्या निक्कै बढेको छ । रमेश खरेलको नामको यही एकाउन्टबाट पोस्ट भएको यही स्टाटसलाई ६८ हजार ५७२ जनाले लाइक गरिसकेका छन् ।
यो स्टाटसलाई सेयर गर्नेको संख्या मात्र २० हजार ३७१ नाघिसकेको छ । यो बढ्ने क्रम अझै जारी छ । उच्च प्रहरी अधिकारीका नाममा नक्कली आइडीमार्फत सद्भाव विथोल्ने र सनसनी फैलाउने काम भइरहँदा पनि प्रहरीले त्यसलाई रोक्न सकेको देखिंदैन । रमेश खरेलजस्ता उच्च प्रहरी अधिकारीको नक्कली फेसबुक हुनु अत्यन्तै दुखद र आपत्तिको विषय हो ।
फेसबुक पेज नक्कली हो कि सक्कली भनेर सामान्य मानिसले छुट्याउन सक्ने कुरै भएन । यहाँ चासो उनको यस्तो स्ट्यासबाट १ लाख भन्दा बढी मानिसहरु भ्रमीत हुनु मात्रै होइन कुनै दुर्घटना भए यसको जिम्मा कसले लिन्छ ? याँहा सबाल कसैले दुरुपयोग गरेको मात्रै होइन, दुरुपयोग रोक्न प्रहरी किन उदासीन छ भन्ने हो ।
यस विषयमा गृह सचिव सूर्यप्रसाद सिलवालसँग साधारण मानिसले स्टाटस लेख्दा पक्राउ गर्ने तर प्रहरीले किन बरिष्ट अधिकारीको नाममा चलाईएको नक्कली आइडी चलाउनेलाई किन पक्राउ नगरेको भन्ने प्रश्नमा उनले तपाईले भनेको ठीक हो त्यस विषयमा छानविन गरेर कदम चाल्ने बताए । सिलवालले यस विषयमा नेपाल प्रहरीका आइजीसँग तत्काल कुरा गर्ने समेत जानकारी दिए ।